Twitter Soro bọtịnụ bọtịnụ na Nhazi
Fraịdee, June 3, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Twitter bụ ọkacha mmasị m na-elekọta mmadụ na-ajụ… Ekwere m ya. M hụrụ ịdị mfe ya na ịdị mfe nke ojiji n'anya - yana uru dị ịtụnanya netwọkụ m na-enye m mgbe m chọrọ enyemaka. Ọhụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze bụ ntọhapụ nke bọtịnụ Twitter. N'adịghị ka njikọ gara aga nke ga-eweghachi gị na Twitter, bọtịnụ a na-enye onye ọbịa ọ bụla ohere ịbanye ma soro site na iji otu pịa bọtịnụ ahụ. Anyị atụkwasịla ya na sidebar anyị ebe a na Martech.
Onye ọrụ iso (na ihuenyo_name)
Ndị na-eso ụzọ na-agụ ngosi (data-show-count)
Agba bọtịnụ (bọtịnụ data)
Agba ederede (data-ederede-agba)
Njikọ agba (data-njikọ-agba)
Ọ bụrụ na ịnọghị jụụ dezie koodu ahụ n'onwe gị, Twitter agbakwunyela peeji ntinye akụ ebe ị nwere ike hazie onwe gị Twitter Soro Button ma weghachite edemede ahụ iji tinye ya na saịtị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ igwu ala, Twitter nwere peeji mmepe zuru ezu nke raara nye Button But.
Otu ndetu - ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdepụta ọtụtụ Akaụntụ Twitter ị ga-eso, ị nwere ike depụta ọtụtụ ịchọrọ ịchọrọ ma tinye mkpado edemede otu oge! Anyị mere nke a na anyị Akwụkwọ ịde blọgụ saịtị.
Daalụ maka ndụmọdụ ahụ. Ekelere nke ukwuu